आखिर ड्रोन के हो ? | सिमान्तMarginal आखिर ड्रोन के हो ? – सिमान्तMarginal
नेपालको सुर्खेतमा सि एन एन हिरो म्यागी डोयनले ड्रोन उडाइन र कस्टडिमा परिन । त्यसै त होईन नि ! ड्रोनेको अतिक्रमण बिरुद्ध जर्मनिमा प्रदर्शन नै भयो । यसको बैधानिकतालाई लिएर सयुक्त राष्ट्र संघमा कुरा उठिरहेकोछ । अहिले अमेरिका र चिनको बिचमा यस्तै बखेडा आएको छ । ड्रोनको दुख भोग्ने मुलुकमा पाकिस्तान पनि पर्छ । मान्छे मार्ने देखी कन्सुत्ले गर्नेसम्मका यि विना चालक सन्चालित ड्रोन आखिर के हो र के गर्छ यसले, कसरी प्रयोग गरिएको छ ? बुझ्ने हो कि !
ड्रोनको दुख भोग्ने मुलुकमा पाकिस्तान पनि पर्छ । मान्छे मार्ने देखी कन्सुत्ले गर्नेसम्मका यि विना चालक सन्चालित ड्रोन आखिर के हो
के प्रयोग गर्नेले बाहिर भने झै सोझो तरिकाबाट मात्रै प्रयोग गरेको होला ? हालैको घटनामा फिलिपिन्सको समुद्रमुनी घुमिरहेको अवस्थामा अमेरिकि ड्रोन भेटे पछी त्यसलाई चाइनाले समातेर राख्यो । नव नियुक्त राष्ट्रपती ट्रम्पले चाइनालाई आफ्नो ड्रोन “चोर” भन्ने आरोप लगाए भने चाइनाले अमेरिकालाई आफ्नो जासुसी गरेको भन्यो । मुलत यि गतिविधी एसियाको फैलदो शक्ती र त्यसलाई नियन्त्रणसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले जे देखिन्छ त्यो भन्दा भित्र धेरै कुरा लुकाएर विश्वलाई मूर्ख बनाइेको हुन्क्छ ।
Previous Postपानीले भारतलाई कसरी तड्पाएको छ, दर्दनाक कथा !Next Postनबुझेर त्यही तेरो र मेरो